Izinhlelo ezi-7 zokugubha uNyaka Omusha waseChina eMadrid | Izindaba Zokuhamba
Isithombe nge-El Confidencial
Kusukela ngoJanuwari 13 kuya kuFebhuwari 17, kuzogujwa uNyaka Omusha waseChina eMadrid, ngakho-ke ngeke kudingeke ukuthi uye eMpumalanga Ekude ukuyojabulela umkhosi onjalo oyingqayizivele. Umkhandlu wedolobha lenhlokodolobha uhlele inqwaba yemisebenzi yamasiko nemihlangano yokusebenzela ukugubha uNyaka weQhude Elibomvu Lomlilo ngokubambisana neConfucius Institute, inxusa laseChina, ihholo ledolobha laseChengdu, izinhlangano ezehlukene nezakhamizi zaseUsera, lapho kuhlala khona ingxenye enkulu yomphakathi waseChina eMadrid.
Uma uhlela ukuchitha izinsuku ezimbalwa eMadrid, Ngokulandelayo sizokutshela ukuthi uNyaka Omusha WamaShayina uqukethe ini futhi yini imisebenzi ehlelwe kulezi zinsuku. Kukhona konke! Kusuka embukisweni wezithombe nakumashiyithi, emidlalweni yomculo nasezinsukwini zokudla.
1 Usho ukuthini unyaka weRed Rooster of Fire?
2 Ukwazi kangcono uChengdu
3 Umkhosi wamalambu ePalacio de Cibeles
4 Umbukiso Wezandla wePlaza de España
5 Amashabhu wezingane ngesiko lamaShayina
6 I-China Nambitha
7 Amaloli Okudla anokudla kwendabuko
8 Umbukiso Wonyaka Omusha WamaShayina
Usho ukuthini unyaka weRed Rooster of Fire?
Iholide lonyaka omusha waseShayina linezinkulungwane zeminyaka yomlando. Waziwa nangokuthi uMkhosi Wentwasahlobo ngoba uvalelisa ebusika futhi ungenisa isizini entsha. Njengoba unyaka omusha ungena, amaShayina azilungiselela ngokuhlanza izindlu zawo, akhokhe izikweletu zawo, athenge izingubo ezintsha futhi apende neminyango yawo. Kulomcimbi kugujwa unyaka weRed Rooster of Fire. Lesi silwane singokweshumi ezilwaneni eziyishumi nambili zezinkanyezi zaseChina futhi sinencazelo ekhethekile: luphawu lwenhlanhla, ubuhle nobukhazikhazi.
Unyaka ngamunye we-zodiac uhlotshaniswa nenye yezinto ezinhlanu zemfundiso yesiShayina: insimbi, izinkuni, amanzi, umlilo nomhlaba. U-2017 uNyaka weQhude Lomlilo, ophindaphindwa kanye njalo eminyakeni engama-60 futhi uthathwa njengehloniphekile futhi osangulukile. Unyaka unikeza wonke amathuba okuthuthukisa nokuzuza okuningi ngokusebenza kanzima, ukwethembeka nokubhekela umsebenzi.
Ukwazi kangcono uChengdu
Isithombe ngeMadrid Mahhala
Umkhandlu wedolobha laseChengdu, inhlokodolobha yesifundazwe saseSichuan, uzobamba iqhaza kulemikhosi okokuqala ngqa. Leli dolobha lidume ngokuba nenqwaba yamabhere epanda, uhlobo olusengozini yokuqothulwa. Ngalesi sizathu, kubekwe umbukiso emlandweni walesi silwane eMadrid Zoo kanti iChulina baby panda yethulwe.
Ngaphezu kwalokho, phakathi nesonto likaChengdu kuzokwethulwa izitsha ezihamba phambili zokudla kwaseSichuanese, okubonakala ngokusebenzisa izinongo eziningi ukwenza isizini izitsha. Ngokunjalo, iTea House izofakelwa iMeya yePlaza kusukela ngoLwesihlanu kuze kube nguJanuwari 19, lapho wonke umuntu ofuna ukuza ezozama lesi siphuzo esijwayelekile saseChina. Lapho ungajabulela imibukiso ehlukile noma uthande umbukiso wezithombe ku-Chengdu Tourism.
Umkhosi wamalambu ePalacio de Cibeles
Ngesikhathi soNyaka Omusha waseChina, ihholo ledolobha lenhlokodolobha lizokhanyisa iPalacio de Cibeles futhi lihlobise eminye imigwaqo ngenkathi umphakathi waseMadrid uzophanyeka isibhengezo esikhulu esivela endlunkulu yalesi sikhungo ePuerta del Sol ukwamukela uNyaka WeQhude Elibomvu Lomlilo futhi njengesipho emphakathini omkhulu waseChina waseMadrid.
Isithombe nge-Engel & Völkers
Umbukiso Wezandla wePlaza de España
Umbukiso wendabuko waseChina ePlaza de España nawo uzobuya. Kuzoba ngempelasonto kaFebhuwari 11 no-12, kube nabakhangisi abangaphezu kwamashumi amabili. Ngaphezu kwalokho, kuzoba nesiteji esikhulu lapho amalungu omphakathi waseChina ahlala eSpain azocula izingoma, imidanso kanye nemibukiso ye-kung fu kulabo abakhona.
Amashabhu wezingane ngesiko lamaShayina
Phakathi kwezinhlelo ezihlelelwe izingane, i-workshop yokuzindla ivelele ngeSonto 29 ngo-11.30 ekuseni. ethempelini lamaBuddhist lase-Usera (Luis de la Torre, 12). Inhloso ukuthi bafunde izindlela zokuhlushwa ngendlela ejabulisayo futhi bakwazi ukuzisebenzisa lapho bezidinga. Ngalo lolo suku, ngo-12.15: XNUMX ebusuku. kuzoba neseshini ye-karate kulabo abangaphezu kweminyaka emihlanu ubudala e-Usera Cultural Centre.
Isithombe ngemizuzu engama-20
Ihlelwe yinxusa laseChina kanye noHulumeni waseChengdu kanye nezikhungo zaseMadrid, kusuka ngoJanuwari 13 kuya kuFebhuwari 12, kuzohlelwa lo mcimbi omkhulu wokudla okuhle okuhlose ukukhombisa ingcebo yaseChina yokupheka. Kulolu shicilelo, iziphakamiso eziyi-18 sezizonke (lezo zeCasa Lafu, iRoyal Mandarin noma i-Asia Gallery, phakathi kokunye) zizohlinzeka ngamamenyu azo zonke izabelomali. Ngaphezu kwalokho, umpheki waseChina uFu Haiyong uzolungisa amakhono athile aseSichuan endaweni yokudlela yaseGran Meliá Palacio de los Duques.
Amaloli Okudla anokudla kwendabuko
NgoJanuwari 28 no-29, kuzofakwa amaloli amaningana okudla ePlaza de la Junta esifundeni sase-Usera ukunambitha ukunambitheka okumnandi nokwendabuko kwaleli siko emalolini ahlukahlukene akhethekile okudla.
Umbukiso Wonyaka Omusha WamaShayina
NgoMgqibelo, Januwari 28 kusukela ngo-11 ekuseni. ngo-13: XNUMX ntambama Umbukiso wendabuko waseShayina wonyaka omusha uzokwenzeka emigwaqweni yesifunda sase-Usera, lapho uzokwazi khona ukubona imibukiso ye-pyrotechnic, imidanso nomculo odumile, kanye nombukiso ohambisana nezilo nezingonyama.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Impelasonto » Izinhlelo ezi-7 zokugubha uNyaka Omusha waseChina eMadrid
Vakashela amaPaki Kazwelonke waseCanada mahhala le 2017